Manana olana amin'ny fitorahana blaogy? Drafitra mifanaraka amin'izany. | Martech Zone
Manana olana amin'ny fitorahana blaogy? Drafitra mifanaraka amin'izany.
Talata, Jolay 26, 2011 Alakamisy 22, 2012 Jenn Lisak Golding
Amin'ny maha bilaogera manokana sy matihanina ahy dia manana olana amin'ny famoahana lahatsoratra bilaogy isan'andro aho noho ny asako be loatra sy ny fameperana amin'ny fotoana hafa. Fa raha te hahomby amin'ny maha-bilaogera ianao, na ho azy manokana izany na ho matihanina, dia mila mandinika zavatra telo ianao: ny fahaizan'ny fotoana, ny maha-zava-dehibe. Raha hampiditra ny tsirairay amin'ireo singa ireo dia ilaina ny manana drafitra. Ireto misy torohevitra haingana 3 hanampiana anao bilaogy mahomby kokoa:
1. Mamorona fandaharam-potoana atiny.
Manapaha hevitra hoe andro iza no tianao hapetraka ao amin'ny bilaoginao ary manohy mamokatra atiny amin'izao andro izao. Rehefa fantatry ny mpamaky hoe rahoviana no antenaina ny atiny, dia hovakin'izy ireo kokoa ny lahatsoratrao amin'izany andro izany. Miezaha ihany koa mandefa intelo farafahakeliny mandritra ny herinandro. Mitazona ny sainao ho tampon'ny sainao izany ary manampy amin'ny fampandrosoana SEO, marketing ary marika.
2. Mamorona drafitra atiny.
Matetika ny olana dia miezaka mamantatra izay tianao bilaogy. Jereo ny kalandrieo - raha hanatrika hetsika mifandraika tsy ho ela ianao dia mikasa ny hanoratra momba izany ny ampitso. Ny fananana drafitra momba izay hanoratanao dia manamora kokoa anao amin'ny famitana ny asanao bilaogy amin'izany andro izany.
3. Zava-dehibe ny fotoana.
Manorata momba ireo zavatra tonga ara-potoana ary hampiroborobo ara-potoana ny hafatrao. Raha manoratra lohahevitra mafana ianao dia ataovy izay hizaranao rehefa manararaotra azy indrindra amin'ny fomba fijery SEO sy marketing.
Ny fanokanana fotoana handrafetana ny bilaoginao mandritra ny volana manaraka na amin'ny herinandro ho avy dia hamonjy fotoana any aoriana any. Fa aza adino ny manao improvise rehefa ilaina!
Tags: fitorahana bilaogybilaogy orinasadrafitraplanningWriting
Mpanoratra Windows Live ho an'ny WordPress